साहरुख–कट्रिनाको जोडी ‘सत्ते पे सत्ता’ को रिमेकमा ! -
२०७६, ३० बैशाख सोमबार ०९:१९ May 13, 2019 clickonLeaveaComment on साहरुख–कट्रिनाको जोडी ‘सत्ते पे सत्ता’ को रिमेकमा !
लगातर चलचित्र असफल भए पछि र धेरै आशा गरिएको पछिल्लो चलचित्र ‘जिरो’ असफल भएपछि नायक साहरुख खानले नयाँ चलचित्रमा काम गरेका छैनन् । उनी, नयाँ चलचित्र साइन गर्ने कुरामा निकै नै सजग देखिएका छन् । तर, यतिबेला फेरि उनले नयाँ चलचित्रमा काम गर्न लागेको चर्चा सुरु भएको छ ।
निर्माता रोहित सेट्टी उनको प्रोडक्षनबाट नयाँ चलचित्र निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । फराह खानले निर्देशन गर्न लागेको यो चलचित्र बलिउडका नायक अमिताभ बच्चन र हेमा मालिनीको हिट चलचित्रको रिमेक हो ।
भारतीय मिडियाका अनुसार, यो चलचित्रको रिमेकमा नायक साहरुख खान र नायिका कट्रिना कैफ देखिनेछन् । निर्देशक फराह खान नायक साहरुख खानसँग काम गर्न सधै नै उत्साहित हुन्छिन् ।
उनी, चलचित्र ‘ह्याप्पी न्यू इयर’पछि साहरुखसँग फेरि काम गर्न चाहन्छिन् । चलचित्रको कथालाई लिएर साहरुख र कट्रिनाले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
अहिले यो बिषयमा यसको निर्माणपक्षले केही पनि भनेको छैन । चाडै नै यो बिषयमा घोषणा हुने भारतीय मिडियाले लेखेका छन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध , विधेयक संसद्मा अघि बढ्न नदिने कांग्रेसको चेतावनि
साराले गरिन् दिशालाई आउट
२०७६, ४ बैशाख बुधबार १७:४४ April 17, 2019 clickon
पतिसंग रमाईरहेकी सोनमलाई तत्काल जापान छाड्न फ्यानको आग्रह
२०७६, ५ असार बिहीबार १३:५१ June 20, 2019 clickon
शाहरुख पुत्र आर्यन ‘बाहुबली’ स्टार प्रभाससँग डेब्यु गर्दै
२०७६, १० श्रावण शुक्रबार १४:२० July 26, 2019 clickon